पिनास किन हुन्छ? यस्ता छन् लक्षण, कारण र उपचार - चौतारी पोष्ट अनलाइन
पिनास किन हुन्छ? यस्ता छन् लक्षण, कारण र उपचार
टाउको दुख्दा वा रुघाखोकी लाग्दा मानिसहरु पिनास भयो भन्ने गर्छन्। तर यो भ्रम हो। टाउको दुख्नु वा रुघाखोकी लाग्दा पिनासकै कारणले मात्र नहुन पनि सक्छ। टाउको दुख्नुको ८० प्रतिशत कारण पिनास नहुन सक्छ। यसको अर्थ टाउको दुख्ने व्यक्तिहरु मध्ये २० प्रतिशतमा भने पिनास भएकाले टाउको दुख्ने समस्या हुनसक्छ।
पिनास भनेको नाकको भित्री भाग हुने खाली ठाउँमा अवरोध भएर स्वासप्रस्वासमा बाधा पुग्नु हो।
यसलाई मेडिकलको भाषामा साइनोसाइटिस साइनसहरुको इन्फलामेसन पनि भनिन्छ। पिनासको लक्षण सामान्य रुघाखोकी तथा टाउको दुखाइ मात्र होइन। तर, पिनास हुदा लक्षण पनि देखिन्छ। ब्याक्टेरिया, फंगस, भाइरल इन्फेक्सनले पिनास हुनसक्छ।
– नाकमा रुघा लाग्ने,
– नाकबाट सिगान बगिरहने,
– नाक बन्द हुने,
– गन्ध थाहा नपाउने,
– नाक बन्द हुने।
– नाक वा आँखाको वरीपरि दुख्ने।
पिनासको समस्या साँच्चै नै भएको छ भने यसको औषधि उपचार गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म पिनासको समस्या देखिएको छ भने चिकित्सकको परामर्शमा औषधि उपचार तथा शल्यक्रिया नै गरेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकी पिनासको समयमा उपचार भएन भने नाकभित्र मासु पलाउने, टाउको दुखिरहने, कान बन्द भइरहने समस्या बढ्दै जान्छ।
जसले गर्दा तनाव समेत बढ्ने र मानसिक समस्या पनि देखिन सक्छ। जसले गर्दा मानिसहरुले आफ्नो नियमित कामहरु समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।
पिनास भएको व्यक्तिले कुनै खानेकुरा खाँदा एलर्जीको समस्या आउछ भने त्यस्तो खानेकुरा खानु हुँदैन।
यस्तै प्रदूषित वातावरणमा रहदा पनि नाकमा संक्रमण भइ पिनासको समस्या देखिन्छ। त्यसैले घरबाहिर निस्किदा वा प्रदूषित वातावरणमा जाँदा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ।
सामान्य रुखाखोकी मात्र छ भने बाफ लिदा, कपाल भारती लगायतका योग गर्दा तथा तातोपानी पिउँदा पनि ठिक हुनसक्छ। तर साँच्नै नै वर्षौदेखि पिनासको समस्या भइरहेको छ भने चिकित्सकसँग परामर्श लिएर औषधि उपचार नै गर्नुपर्ने हुन्छ।
(नाक,कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ न्यौपाने शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत छन्।)swsthyakhabarpatrika/from
Prevएभर्टनसँग लिभरपुलको हार
Nextनिर्वाचन नै सङ्कट समाधानको माध्यम : राप्रपा अध्यक्ष थापा